रोटरी क्लब अफ विराटगर डाउनटाउनद्वारा मस्तिष्क पक्षाघात भएका बालबालिकाका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
2021-11-25 12:11 Hamro Biratnagar
विराटनगर, ८ मंसिर । सामाजिक कार्यमा अग्रसर रोटरी क्लब अफ विराटनगर डाउन टाउनले मस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी) भएका बालबालिकाहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको छ ।
विराटनगर आदर्श उच्च मा.वि स्थित रोटरी भवनमा क्लबले मस्तिष्क पक्षाघातबाट पीडित बालबालिकहरुका लागि स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको हो ।
सेल्फ हेल्प ग्रुप सेरेब्रल पाल्सी (एसएचजीसीपी) ले सीपी डे केयर सेन्टरका १२ बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो ।
शिविरमा स्विजरल्याण्डका बालरोग विशेषज्ञ बर्नहार्ड स्मिथ, काठमाडौंको चिकित्सा टोलीले बाल रोग विशेषज्ञ डा. प्रज्ञा कर्माचार्य राजभण्डारी, अभा ढुंगाना, ईईजी प्राविधिक मनोज शाह, फिजियोथेरापिस्टलगायतले स्वास्थ्य परिक्षण गरेका थिए ।
स्वास्थ्य परिक्षण पछि पीडित बालबालिकाका अभिभावकलाई औषधी र आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श समेत दिइएको थियो ।
शिविरमा क्लबकी चार्टर प्रेसिडेन्ट तथा सीपी समिति अध्यक्ष रोटरियन डा. ममता वर्मा, रोटरी क्लब अफ विराटनगर डाउन टाउनकी अध्यक्ष संचिता जैन, सचिव अनिता सारडा, सेवा समिति परियोजना अध्यक्ष गिरिजा सारडालगयत क्लबका सदस्यहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
« स्यालसँग ठोक्कियो बुद्ध एयरको जहाज
साैराहामा जम्मा हुँदै एमाले कार्यकर्ता »